Amin'ny fitaterana mora sy haingana ny fampandrosoana ara-toekarena, Ningbo Electronics Co. Zhengmao, Ltd. (amin'ny anarana taloha Ningbo Shitong Telecommunication Component Factory) dia tanàna ao amin'ny atsimon'i Ningbo Zhejiang Province, Sina. Naorina tamin'ny 2002, ny orinasa specializes amin'ny fikarohana sy ny orinasa mpamokatra entana ara banga Spark, Gas marary mitsika Tube sy ny hafa.
Spark ara Gap (SSG) manana malefaka indrindra manomboka avy any 110V mba 800V maro anisan'izany ny tombontsoa feno karazany, tsara fahamarinan-toerana sy ny fahari androm-piainany (azo mifamadika fa nandritra ny an'arivony fotoana ho an-tapitrisany times). Izany vokatra no tena ampiasaina ho an'ny ignition amin'ny nanafina tsy hampihilangilana na an-dalambe jiro, sns
Gas Tube marary mitsika dia manohitra ny fahanterana amin'ny avo insulation fanoherana, capacitance sy haingana kely hamaly. Izany no be mpampiasa mahery-malefaka fiarovana ny Telecom sy ny fitaovana elektronika ary koa ny fiarovana ny tselatra.
Isika mpikambana eo ambany famantarana ny Quality Management System (ISO9001-2008QMS). Ny vokatra rehetra hihaona amin'ny iraisam-pirenena fitsipi-IEC61643-311, fehin-kevitra Standard ny Itu-T K.12 sy ny fitsipika nasionaly GB / T9043-2008 / Serasera Fitaovana Over-malefaka Fiarovana amin'ny Jeneraly Technical Fepetra amin'ny marary mitsika Gas Tube, sns Gas marary mitsika Tube no RoHS mifanaraka tsara, ihany koa dia voamarina tamin'ny alemà TüV, American Ul sy SGS.
Araka ny Quality, dia mikendry fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fanatsarana ny vokatra mandrakariva kalitao sy ny asa fanompoana mba hahazoana izay ilainao.